Kulankii 6aad: Barnaamij Bilaash ah iyo Ganacsi | Laga soo bilaabo Linux
Kulan 6aad: Barnaamij Bilaash ah iyo Ganacsi
Rugta Arjentina ee Shirkadaha Software-ka Bilaashka ah (CAdESoL) waxay mar labaad qabanqaabineysaa kulanka isha furan ee sanadka. Daabacaaddiisii ​​lixaad xafladdu waxay soo bandhigi doontaa qaab cusub; Bandhigyada soo jireenka ah ka sokow, dadweynuhu waxay awoodi doonaan inay booqdaan istaagyo kala duwan si ay wax uga bartaan horumarkii ugu dambeeyay ee barnaamijyada softiweerka, hirgelinta iyo horumarka, sidaas darteedna ay u helayaan meel ay ku wada xiriiraan iyo fikradaha la is weydaarsado.
Goorma: Nofeembar 25 laga bilaabo 8.30 a.m. ilaa 12.30 pm
Xagee: Hotel Savoy, Av. Callao 181. CABA
"Sannadkan waxaan dooneynaa inaan xoojino bulshada, oo aan abuurno xiriir ka dhexeeya shirkadaha, si ay munaasabaddu u noqoto goob run ah oo la isku weydaarsado fikradaha iyo ganacsiga mashruuca" cadeeyaa Daniel Coletti, Madaxweynaha CAdESoL.
Dhamaadka munaasabada, waxaa Khatimidii Software Bilaash ah in qolku u geyn doono caddeyn ahaan shirkadaha soo saara barnaamijyada bilaashka ah ama furan.
Macluumaad dheeraad ah iyo diiwaangelin at: https://eventioz.com.ar/e/vi-software-libre-y-negocios
Qiimaha tigidhada: $ 150. Meelo xaddidan
Ku saabsan Cadesol
Rugta Arjentina ee Shirkadaha Software-ka Bilaashka ah (CAdESoL) waxay ku saleyneysaa howlaheeda ugu muhiimsan: kor u qaadista horumarka ganacsiga iyadoo loo marayo tallaabooyin wadajir ah iyo dhiirigelinta hirgelinta Barnaamijka Bilaashka ah ee shirkadaha. CAdESoL waxaa ka mid ah bixiyeyaasha adeegga teknoolajiyada bilaashka ah sida: Linux, PHP, Python, Zope, Plone, Drupal, SugarCRM.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Kulan 6aad: Barnaamij Bilaash ah iyo Ganacsi
Nooca Fedora 23 waa halkan!
CANAIMA GNU / LINUX: Kaliya Ma Lagu Qabanayaa Shaqada Gurigaaga?